Cotton Canvas Bag nePazasi Gusset
Cotton Canvas Tote ine Gusset
Maitiro ekusarudza nemazvo zvinhu uye tekinoroji yemabhegi ezvipo kuita kuti kurongedza kwavo kuve nemavara?
Nguva yekutumira: Aug-15-2021
Maitiro ekusarudza nemazvo zvinhu uye tekinoroji yemabhegi ezvipo kuita kuti kurongedza kwavo kuve nemavara? Pepa chipo bhegi ndiro rinonyanya kufarirwa bhegi rekurongedza parizvino. Tichifunga nezvekudhura kwayo uye kushanda kwayo kwakanaka kwekudhinda, inodiwa nemabhizinesi mazhinji. Saka ndezvipi zvinhu zvikuru zvemabhegi ezvipo zvemapepa?...Verenga zvimwe »
Pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza inofarirwa zvakanyanya, uye vagadziri vemabhegi e canvas vanounza mikana mitsva
Nguva yekutumira: Aug-13-2021
Pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza inofarirwa zvakanyanya, uye gadzirisa eco canvas bag vagadziri vanounza mikana mitsva Muhupenyu hwezuva nezuva, nekuti magadzirirwo uye kubata kweOxford jira bhegi uye kugadzirisa eco canvas bhegi zvakafanana, vanhu vazhinji havazokwanisa kusiyanisa jira. mabhegi ma...Verenga zvimwe »
Ndeupi rudzi rwemabhegi eco friendly ari nyore kushandisa uye anotaridzika zvakanaka?
Nguva yekutumira: Aug-11-2021
Ndeupi rudzi rwemabhegi eco friendly ari nyore kushandisa uye anotaridzika zvakanaka? Kubva pakutanga kusvika ikozvino, eco hushamwari bhegi rekurongedza rave rave rakawanda kupfuura mudziyo wezvinhu. Mukushandisa kwakawanda uye kwakawedzera, tinoona zvishoma nezvishoma kuti inogona kunyatso kuita zvirinani, ichiita kuti zvive nyore uye zvakare ...Verenga zvimwe »
Kusarudzika kwemabhegi etote asina kuruka uye anowanzo shandiswa kudhinda maitiro
Classification yemabhegi ematote asina kurukwa uye anowanzo shandiswa kudhinda Kuzivikanwa kwemabhegi ematote asina kurukwa kunoita kuti mabhegi ematote asina kurukwa awedzere uye kuwanda, uye kune mamwe maindasitiri anoshanda. Nhasi, ngatitaurei muchidimbu kupatsanurwa...Verenga zvimwe »
Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kutanga kubva mukugadzira mabhegi kuti tive nechokwadi chemhando yezvigadzirwa zvakapedzwa?
Nguva yekutumira: Aug-07-2021
Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kutanga kubva mukugadzira mabhegi kuti tive nechokwadi chemhando yezvigadzirwa zvakapedzwa? Icho chinonyanya kukosha chinangwa chekurongedza ndechekuchengetedza zvinhu, kuitira kuti zvinhu zvirege kukuvadzwa, kurasika, kudonhedza uye kushata mukutenderera kwese kwekuchengetedza, kutakura uye kutengesa. ...Verenga zvimwe »
Chii chatinofanira kuchenjerera patinenge tichidhinda mabhegi? Zvishanu zvidiki zvidiki zvekudhinda handbag
Chii chatinofanira kuchenjerera patinenge tichidhinda mabhegi? Zvishanu zvidiki zvidiki zvekudhinda handbag Patinoenda kunotenga, chinhu chikuru chatinotakura mumaoko ibhegi. Unozivei nezve mahandbag? Chii chatinofanira kuchenjerera patinenge tichidhinda mabhegi? 1. Ngwarira kusarudzwa kwemat...Verenga zvimwe »
Zvizhinji zvakajairika zvinhu zvekugadzira Drawstring Mabhegi!
Nguva yekutumira: Aug-03-2021
Zvizhinji zvakajairika zvinhu zvekugadzira Drawstring Mabhegi! Vagadziri nevatengi vakasona mabhegi emachira vanogona kuziva kuti machira ese akapfava anogona kugadzirwa muchimiro chebhegi rekudhonza tambo. Mabhegi mazhinji eDrawstring anogadzirwa nedonje, canvas, rineni, polyester, velvet, isiri-yakarukwa uye zvimwe ...Verenga zvimwe »
Ita zviri nyore fashoni "mambo wezvemamiriro ekunze" nebhegi re canvas rakadhindwa
Nguva yekutumira: Aug-01-2021
Ita nyore nyore fashoni "mambo wezvakatipoteredza" nekadhindwa bhegi rejira Mumakore achangopfuura, nekuvandudzwa kwemararamiro evanhu, mabhegi emucheka ave rudzi rwezvigadzirwa zvakasvibirira mumusika wevatengi. Chinhu chikuru ndechekudzivirira kwezvakatipoteredza uye kushandiswazve. Paunoenda...Verenga zvimwe »
Kushandisa tsvina kugadzira mabhegi akasvibira
Nguva yekutumira: Jul-30-2021
Kushandisa tsvina kugadzira mabhegi akasvibira Kutsvaga kuchengetedza zvakasvibirira kwezvakatipoteredza uye kupindura kunharaunda yehupenyu hwepasi-kabhoni ndiyo miitiro yakakosha yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muChina. Kuti upindure nesimba ku "plastic restriction order" uye kutsigira green co ...Verenga zvimwe »
Kushandisa mabhegi ane ushamwari kwezvakatipoteredza kunoita kuti zvive nyore kwatiri kurarama hupenyu husina kabhoni
Kushandisa mabhegi ane ushamwari kwezvakatipoteredza kunoita kuti zvive nyore kwatiri kurarama hupenyu hwekabhoni yakaderera Tingararama sei hupenyu hwekabhoni? Muzana ramakore rechi21, shoko rokuti “low carbon” razova shoko rinofarirwa zvikurusa rokukwezva ngwariro yoruzhinji. Inounza hutano uye hwakanyanya kushamwaridzana ...Verenga zvimwe »
Environmental bhegi: inotaridzika zvakanyanya kushamwaridzana? Asi nzira yaunoshandisa nayo, haisi pasi kabhoni!
Nguva yekutumira: Jul-26-2021
Environmental bhegi: inotaridzika zvakanyanya kushamwaridzana? Asi nzira yaunoshandisa nayo, haisi pasi kabhoni! Kwemakumi emakore, vanhu vakadzidziswa zvakanakira mabhegi ekutenga anotakurika - izvo zvinonzi "Tote Bags". Tinoudzwa kuti mabhegi ekutenga anogona kushandiswa zvakare zvinhu zvakanaka ...Verenga zvimwe »
Self service bag extractor: yakaderera kabhoni hupfumi, hupenyu hwegirinhi hunotanga nemabhegi emahara ekudzivirira kwezvakatipoteredza
Nguva yekutumira: Jul-24-2021
Self service bag extractor: yakaderera kabhoni hupfumi, hupenyu hwegirini hunotanga nemabhegi emahara ekuchengetedza kwezvakatipoteredza Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza inyaya isingaperi. Chero bedzi kukura kwehupfumi kusingaparadzaniswi kubva pakuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kune hukama hwepedyo nehupenyu hwevanhu uye hune hukama nefut ...Verenga zvimwe »
123456 Zvinotevera > >> Peji 1 / 13
Nharembozha: 0086 15184479681